Sergio Busquets Oo Ka Hadlay Kulankii Adkaa Ay La Yeesheen Juventus, Muxuuse Ka Yidhi In Lionel Messi Uu Kusoo Bilaawday Kursiga Keydka?. – WWW.Gool24.net
Ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Barcelona ee reer Spain Sergio Busquets ayaa wuxuu dareen fiican ka muujiyay barbarihii ay kooxda Bianconeri kula soo galeen Allianz Stadium, taasoo ka caawisay in Balaugrana ay u gudubto wareega 16-ka kooxood Champions League-ga.
Hadaba marka uu soo idlaaday kulanka ayuu Sergio Busquets la hadlay wargeyska ree Catalonia ee dalka Spain “Mundo Deportivo” wuxuuna yidhi: “Waxaan kusoo ciyaarnay garoon aad u adag. Laakiin waxaan si wanaagsan ula dagaalanay inaan si wanaagsan kaga hor tagno halista ka imaan karta kooxda Juventus, waxaan u gudubnay wareega 16-ka inagoo hogaamineyna group-ka aan kaga jirno xili ciyaareedkan tartanka Champions League-ga”.
Busquets ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay in kulankan uusan kusoo bilaawan Lionel Messi wuxuuna yidhi: “Go’aanka macalinka waa inaan si weyn u ixtiraamnaa, udu dambeyn waxa aan dooneyno ayaa ah maslaxda kooxda, Valverde wuxuu u arkay go’aankii uu gaadhay inuu ahaa mid wanaagsan, si walbo wax walba waxay ku socdeen si wanaagsan, hadii aan ka hadlose Meesi xili kasta waa laacib muhiim inoo ah”.
Ugu dambeyn Sergio Busquets ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo xidhay qaab ciyaareedka wanaagsan uu xili ciyaareedkan qaadanayo Marc-André ter Stegen, wuxuuna yidhi: “Wuxuu qaadanayaa waqti aad u wanaagsan, wuxuu kaalin weyn uu xili ciyaareedkan ka qaadanayaa guulaha ay kooxdu ka gaadheyso tartamada kala duwan iyo in shabaqeenu uu nadiif noqdo”.